Nepal Auto | यसकारण चर्चित बन्यो प्रिमियम कार बलेनो, यस्ता छन् फिचर
यसकारण चर्चित बन्यो प्रिमियम कार बलेनो, यस्ता छन् फिचर 30 Falgun, 2075
अटो बजारमा प्रिमियम ह्याचब्याक सेगमेन्टमा केही समयदेखि मारुती सुजुकी बलेनो निकै चर्चित रहयो । यो सेगमेन्टमा बलेनोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हुन्डाई एलिट आई २० बजारमा उपलब्ध रहेको छ ।
भारतीय बजारमा केही समयदेखि हुन्डाईको एलिट आई २० भन्दा मारुतीको बलेनोको बिक्री उच्च रहेको छ । जनवरीमा बलेनो १६ हजार ७ सय १७ युनिट बिक्री भएको थियो भने एलिट आई २० मात्र १३ हजार २ सय ९० युनिट बिक्री भएको थियो ।
नेपाली बजारमा पनि बलेनो र एलिट आई २० दुवै गाडी उपलब्ध छन् । यद्यपि नेपाली बजारमा भएको बिक्री तथ्यांकको आधिकारिक जानकारी कम्पनीहरुले नगराउने भएकाले कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
मारुती बलेनोमा धेरै फिचर्सहरु रहेको छ । यसमा इन्ट्री र स्टार्ट, रियर पार्किङ सेन्सर र क्यामेरा, अटोमेटिक हेडल्याम्प्स र फलो मि ल्याम्प्स, स्टेयरिङ माउन्टेड अडियो कन्ट्रोल, अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल र एपल कारप्ले एन्ड्रोइडको साथमा टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट जस्ता फिचर्स उपलब्ध छ ।
कारको सबै भेरिएन्टमा ईबीडीको साथमा एबीएस र ड्युअल एयरब्याग्स पनि उपलब्ध रहेको छ । बलेनोमा ट्रयाक गर्न र यसको उपकरणहरुको स्थिति जान्नको लागि सुजुकी कनेक्टको प्रयोग गरिएको छ । निकै राम्रो फिचर्स भएको कारण गर्दा बलेनोको सो सेगमेन्ट निकै चर्चित रहेको छ ।
इन्जिन र ट्रान्समिसन
बलेनोमा दुई वटा इन्जिनको विकल्प दिइएको छ । पेट्रोल इन्जिनमा म्यानुअल र अटोमेटिक ट्रान्समिसन तथा डिजेल इन्जिनमा ५ स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसन उपलब्ध छ ।
स्पेस र कन्फर्ट
बलेनोको लम्बाई ३९९५ एमएम, चौडाइए १७४५ एमएम र ह्विलबेस २५२२ एमएम रहेको छ । यसको कारणले गर्दा यसको क्याविन स्पेस ठूलो देखिन्छ । कारमा पाँच यात्रीको लागि उपयुक्त सिट रहेको छ । सो कारको रियर सिट निकै आरमदायी रहेको छ । धेरै स्पेस र आरामदायी भएको कारणले लामो दुरीको लागि सो कार निकै उपयुक्त रहेको छ ।
मूल्य र माइलेज
कुनै पनि कारमा माइलेजको निकै ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ, जुन बलेनोमा पाइन्छ । नेपाली बजारमा बलेनो डेल्टा, बलेनो जिटा र बलेनो अल्फा गरी तीन भेरिएन्टमा यो कार उपलब्ध छ । यी कारको मूल्य क्रमशः ३२ लाख ८९ हजार, ३५ लाख ८९ हजार र ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । डिजेल इन्जिनको बलेनोले २७.३९ किलोमिटर प्रति लिटर र पेट्रोल इन्जिनमा २१.४ किलोमिटर प्रति लिटर माइलेज दिने कम्पनीले दावी गरेको छ ।
चालक अनुमति पत्रमा अरु सवारी थप समावेश गराउन के गर्नु पर्छ ? के कति शुल्क लाग्छ ?
प्राप्त गरेको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा उल्लिखित सवारीका अतिरिक्त अन्य कुनै...
इन्जिन र क्षमता दुवैमा शक्तिशाली : न्यु होल्यान्ड
न्यु होल्यान्ड फिएट (इन्डिया) प्रालिद्धारा उत्पादित हुने विभिन्न ब्रान्डका ट्रया...
हर्न बजाउने हजार जना सवारीचालक कारवाहीमा परे
काठमाडौं – महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गत वैशाख १ गतेदेखि चलाएको हर्...